(tonga teto avy amin'ny Ekleziolojia)
Ny ekleziôlôjia na eklesiôlôjia dia sampan'ny teôlôjia kristiana izay andalinana ny anjara asan'ny Fiangonana amin'ny maha vahoakan'Andriamanitra azy eo amin'ny tantaran'ny famonjena ny olombelona. Ny ekleziolojia dia fandalinana ny fiandohan'ny kristianisma, ny fifandraisany amin'i Jesoa, ny anjara asa sahaniny eo amin'ny asam-pamonjena, ny fandaminana misy ao aminy, ny fitsipika mifehy azy, ny zava-kendreny sy ny tanjony ary ny fitantanana azy.
Misampana maro ny fivavahana kristiana ka noho izany dia misy karazany maro koa ny endriky ny ekleziolojia arakaraka ny fiangonana. Mandalina koa ny fiantraika sy ny fivoaran'ireo fiangonana izay nanjary ho Fiangonana amin'ny maha andrin'ny finoana azy koa ny ekleziolojia. Mifandray akaiky amin'ny teôlôjia pastôraly io sampan'ny teolojia kristiana io.
Avy amin'ny teny grika hoe ekklesiologia ny teny hoe eklesiolojia izay avy amin'ny fikambanan'ny teny grika hoe Εκκλησία / Ekklêsia sy λογία / logia . Ao amin'ny Testamenta Vaovao dia atao hoe Fiangonana (grika: Εκκλησία / Ekklêsia) izany vahoakan' Andriamanitra (hebreo: qâhâl) izany izay tsy iza fa ny Kristiana miray ao amin'ny Batisa sy ny fanatrehan'i Kristy nitsangana tamin'ny maty, indrindra fa amin'ny fotoan'ny fandraisana ny Fanasan'ny Tompo na Eokaristia.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Ekleziôlôjia&oldid=1000040"